ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Low Speed Handpiece ဖြစ်သည် မှအရည်အသွေးမြင့် Low Speed Handpiece ဖြစ်သည် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် Low Speed Handpiece ဖြစ်သည် ထိုင်ဝမ်ရှိ စက်ရုံတစ်ခုဖြင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းသူ၊ တင်ပို့သူ၊ အောင်မြင်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ကားရောင်းချသူများနှင့် လက်လီရောင်းချသူများစွာသည် ဖောက်သည်များကို ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများကို သတိပြုမိပါသည်။ နောက်ထပ် ပုံစံများ လိုချင်ပါက၊ ယခုပဲ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မတူညီသော စျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင် အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်။ သင့်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် စျေးနှုန်းများကို အာမခံပါသည်၊ သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
ပုံစံ - H61 series
နိမ့်သည်-အမြန်သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်သုံးကိရိယာများကိုဂီယာများလှည့်ခြင်းဖြင့်သွားကြိတ်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ခြင်းအတွက်သုံးသည်,အများအားဖြင့် ၅၀ အောက်မြန်နှုန်းဖြင့်,rpm ၀၀၀.
Bur အရွယ်အစား:CA BursØ2.၃၅ မီလီမီတာ(fiber optic ရရှိနိုင်ပါသည်)
ထူးခြားချက်:PVD coated တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်ထည်,ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်,၁:တိုက်ရိုက်မောင်း ၁,spray တစ်ခုတည်း,တွန်း-ခလုတ်နှင့်လဲလှယ်နိုင်သောဂီယာအစုံ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sterilizationautoclaves.com/my/low-speed-handpiece.html
အကောင်းဆုံး Low Speed Handpiece ဖြစ်သည် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် Low Speed Handpiece ဖြစ်သည် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ